2 Samuel 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
4 Mgbe nwa+ Sọl nụrụ na Abna anwụwo na Hibrọn,+ o nwere nkụda aka,+ ụmụ Izrel niile makwara jijiji. 2 E nwere ndị ikom abụọ, ndị isi ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga+ nke nwa Sọl, aha otu n’ime ha bụ Beana, aha onye nke ọzọ abụrụ Rikab, bụ́ ụmụ Rimọn, onye Bierọt, nwa Benjamin; n’ihi na a na-agụnyebu Bierọt+ n’ebo Benjamin. 3 Ndị Bierọt wee gbaga Giteyim,+ ha wee bụrụ ndị mbịarambịa n’ebe ahụ ruo taa. 4 Ma Jọnatan,+ nwa Sọl, nwere nwa nwoke dara ngwọrọ.+ Afọ ise ka ọ gbara mgbe e si na Jezril+ zite ozi banyere Sọl na Jọnatan; onye na-elekọta ya wee kuru ya gbawa ọsọ, ma ka o ji ụjọ na-agba ọsọ, nwata ahụ dara wee daa ngwọrọ. Aha ya bụ Mefiboshet.+ 5 Ụmụ Rimọn onye Bierọt, bụ́ Rikab na Beana, wee gawa n’ụlọ Ish-boshet+ ma rute n’ebe ahụ n’ihe dị ka n’etiti ehihie, ka ọ nọ na-ehi ụra ehihie. 6 Ma, lee, ha batara n’etiti ụlọ ahụ dị ka à ga-asị na ha bịara ikporo ọka wit, wee maa ya mma n’afọ;+ Rikab na Beana+ nwanne ya nwoke wee gbapụ n’enweghị onye hụrụ ha. 7 Mgbe ha banyere n’ụlọ ahụ, o dina n’elu ihe ndina ya n’ụlọ ndina nke dị n’ime, ha wee magbuo ya.+ E mesịa, ha gbupụrụ ya isi+ ma buru isi ya na-aga n’okporo ụzọ e si aga Araba n’abalị ahụ dum. 8 N’ikpeazụ, ha buteere Devid isi Ish-boshet+ n’ime Hibrọn wee sị eze: “Lee isi Ish-boshet nwa Sọl onye iro gị,+ bụ́ onye chọworo mkpụrụ obi gị;+ ma Jehova na-abọrọ onyenwe m eze ọbọ+ taa n’ahụ́ Sọl na ụmụ ya.” 9 Otú ọ dị, Devid zara Rikab na Beana nwanne ya, bụ́ ụmụ Rimọn onye Bierọt, wee sị ha: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ bụ́ onye napụtara+ mkpụrụ obi m+ n’ahụhụ+ niile, 10 mgbe otu onye bịara kọọrọ m,+ sị, ‘Lee, Sọl anwụwo,’ n’anya ya, ọ dị ya ka ọ̀ na-eweta ozi ọma, ma mgbe oge ruru ka m nye ya ụgwọ ọrụ onye ozi, mụ onwe m kpaara ya aka wee gbuo+ ya n’ime Ziklag; 11 ma ya fọdụzie mgbe ndị ajọ omume+ gburu onye ezi omume n’ụlọ ya, n’elu ihe ndina ya! Ugbu a, ọ̀ bụ na mụ agaghị ajụta ọbara ya n’aka unu,+ ọ̀ bụ na mụ agaghịkwa ekpochapụ unu n’ụwa?”+ 12 Devid wee nye ụmụ okorobịa ya iwu, ha wee gbuo ha,+ gbupụkwa ha aka na ụkwụ ma kwụwa+ ha n’osisi n’akụkụ ọdọ mmiri nke dị na Hibrọn; ha wee buru isi Ish-boshet lie na Hibrọn+ n’ebe e liri Abna.